Indlu encinane ephantsi kweRejvíz - I-Airbnb
Indlu encinane ephantsi kweRejvíz
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPetr
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uPetr iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-cottage ixhotyiswe ngokukhululekileyo kunye negumbi lokuhlambela labucala, ikhitshi kunye ne-terrace yangaphandle iikhilomitha nje ezimbini ukusuka kwidolophu yaseJeseník kwindawo ezolileyo. Ifanelekile iintsapho ezinabantwana, izibini okanye iqela labantu ukuya kwi-4. I-cottage iyingxenye yegadi kwaye inikezela zonke iindawo zokuhlala. Umlambo waseVrchovištní uhamba ujikeleze i-cottage kwaye kukho indawo yokutyela yasekhaya ekufutshane. I-cottage yimizuzu engama-510 ukusuka eRejvíz. Kufuphi ziindledlana zebhayisekile, iindawo zokutyibilika ekhephini kunye nezinye iindawo zabakhenkethi. Ukufikelela kwisitulo esinamavili.
Kukho indawo eqhelekileyo yokulala, apho kukho iibhedi ezimbini eziphindwe kabini. Ibhedi yesofa nayo ingasetyenziswa xa ifuneka. Indawo yokuhlala iyonke i-45 square metres. Ukuzilungiselela / ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho igrill yangaphandle. Ukukwazi ukusebenzisa iindawo zokutyela ezikufutshane - siya kukuvuyela ukucebisa. Ukupaka kunokwenzeka kwindlela yangasemva kufuphi ne-cottage. Indawo yokupaka isimahla.
I-cottage ibekwe kwindawo ezolileyo ye-Jeseník-Dětřichov malunga nemizuzu emi-4 ngemoto ukusuka kumbindi wedolophu kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka eRejvíz. Kwindawo ekufutshane kukho indalo yeJesenice entle kunye neendawo eziphambili zokhenketho (Rejvíz 10min, Ramzová 20min, Lázně-Jeseník 15min, Praděd 45min, Horní Lipová 15min, Rychlebské trails 30min). Kukho indawo yokutyela yasekuhlaleni ekufutshane. Ngemizuzu embalwa ngemoto ungafika kwiindawo zokungcebeleka ze-ski ezifana neFilipovice, Cervenohorske sedlo, Ramzova, Ostruzna, Branna, njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Petr
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho, ndiya kufumaneka ngokobuqu okanye ngomnxeba.
Iilwimi: Čeština, Deutsch, Polski
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jeseník